“Sacuudiga Waxay U Faa’iidaynayaan Yahuudda..” Dawlada Iran |
“Sacuudiga Waxay U Faa’iidaynayaan Yahuudda..” Dawlada Iran
“Sacuudi Carabiya waxay waddaa inay kala qeybsanaan ku dhex faafiso dalalka Islaamka iyo kuwa gobolka, taasi oo ah waxa ay jecel yihiin maamulka Zahnuuniyadda” waxaa sidaas yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibedda Iran, Seyed Abbas Mousavi.
“Waxaan aragnaa isku dayada Sacuudi Carabiya ay isku keeneyso dalalka deriska iyo kuwa Carbeed ee ka dhanka ah Iran, taasi oo qeyb ka ah isku dayada aan miro-dhalka ahayn ee maamulka Mareykanka iyo kan Yahuudda” ayuu ku daray.
Mousavi ayaa niyad-jab ka muujiyey in Riyadh ay weli waddo “eedyemo aan sal lahayn” oo ka dhan ah Iran, ayada oo ka faa’iideysanaysa marti-gelinta shirka Islaamka.
Boqorka Sacuudiga, Salman Bin Cabdulcaziz ayaa maanta sii xoojiyey weerarka ka dhanka ah Tehran isaga oo dalalka Carabta ugu baaqay inay ka hor tagaan ficillada “dambiyeed” ee Iran.
Sacuudiga ayaa magaalada Makkah ku marti-gelinaya laba shir oo ay kala leeyihiin dalalka Carabta iyo kuwa Islaamka, kuwaas oo ka dhan ah Iran, waxaana ka qeyb-galaya dhammaan dalalka Carabta marka laga reebo Iraq.